सेक्स गर्ने बेलामा अचानक उत्तेजना हराउँछ ? - Nepal News - Latest News from Nepal
सेक्स गर्ने बेलामा अचानक उत्तेजना हराउँछ ?
सेक्सका बेला उत्तेजना हुँदैंन भने, सम्झनुहोस्, समस्या शारीरिक होइन, मानसिक स्तरमा छ ।
सर्जरी : सबै उपायले काम गरेन भने अन्तिम उपाय भनेको सर्जरी हो । (स्वास्थ्य खबरपत्रिका)दैनिकनेपाल डटकम बाट साभार गरिएको
आईएमईले १५औं वाषिर्कोत्सव मनायो